Manao Hetsi-panoherana Ny Fanimbàna Ny Alan’i Prey Lang Ireo Moanina ao Kambodza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2015 4:33 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Nederlands, 日本語, English
Tato anatin'ireo taona faramparany, nanome tany midadasika ho an'ireo orinasa teo an-toerana sy avy any ivelanyny governemantan'i Kambodza mba hampandrosoana ny fambolena sy ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany afaka ataon'ny firenena. Kanefa, maro amin'ireo tany nifanarahana no misy ireo toerana arovana sahala amin'i Prey Lang. Nahatonga fifandirana isankarazany tamin'ny resaka lalàna sy fifandonana mahery setra manerana ny firenena ihany koa ny tsy fahampian'ny mangarahara manodidina ilay fanomezana tany.
Ny taona 2011, nanao hetsi-panoherana ‘Avatar ireo Kambodziana mpikatroka mafàna fo sy ireo vondron-tanàna teratany, mba hitorohana ny fanimbàna ny Prey Lang. Niakanjo sahala amin'ireo olona Na'vi avy amin'ilay horonantsary Avatar an'ny Hollywood, nanainga ny governemanta ireo mpanao hesti-panoherana mba hanajanona ireo fanapahana hazo sy fambolena ” caoutchouc” any Prey Lang.
Mbola mitohy mandrak'androany ny hetsika hiarovana ny Prey Lang raha tsy misy fitsaharana ny fanapahana ny ala ao amin'ilay toerana. Nandritra ny fotoana mitovy amin'izany, vao maika nihombo koa ny olan'ny fandripahana ny ala ao Kambodza rehefa nanao fanomezana tany hafa indray ny governemanta.
“#Kambodia no miaina ny Fandripahana Ala Mihazakazaka Indrindra Maneran-tany”
Ny volana Jolay lasa teo, ireo moanina avy amin'ny Tambajotranà Moanina Tsy Miankina ho an'ny Rariny ara-tSosialy, nanatitra an-tànana ireo fitaovana fanapahana hazo nogiazana teny amin'ny tompony, ho an'ny Sampan-draharahan'ny Ala sy Antenimieram-Pirenena tany Phnom Penh, renivohitry ny firenena, mba hanamarinana fa mitohy hatrany ny fanimbàna ny alan'i Prey Lang.
Nanazava Andriamatoa Hajaina Buntenh, lehiben'ilay vondrona, hoe maninona no nanapa-kevitra ny hanao hetsi-panoherana ireo moanina:
Nandritra ny herinandro faran'ny Septambra, nifamory teny amin'ireo làlan'i Battambang indray ireo moanina mba hampahatsiahy ireo vahoaka sy ny tompon'andrakitra ao amin'ny governemanta fa manohy manimba ny alan'ny firenena ireo orinasa mpandraharaha amin'ny resaka fambolena.